Tranga fanorisorenana ara-nofo ao Trinité & Tobago manasongadina fa ilaina ny politika tsara kokoa momba izany · Global Voices teny Malagasy
Tsy miaro ny olom-pirenena amin'ny fanorisorenana ara-nofo any amin'ny toeram-piasana ny lalàna misy ankehitriny
Voadika ny 05 Desambra 2019 5:31 GMT
Rishi Persad Maharaj, izay niasa tamin'ny servisy ho an'ny mpanjifa tao amin'ny Banquet and Conference Center Limited (BCCL), ao amin'ny tranoben'ny Cascadia Hotel no nitondra ny raharaha. Nilaza i Maharaj fa nanao fanamarihana sy fihetsika tsy mendrika taminy ny talen'ny asa, izay vehivavy. Tamin'ny taona 2015, nanao fitarainana tany amin'ny Equal Opportunity Commission (Vaomieran'ny Fampitoviana Hirika) (EOC) i Maharaj, noho ny “fanavakavahana amin'ny asa mifototra amin'ny fanorisorenana ara-nofo sy ny fampanaovana ho lasibatra”.
Ny fironany ara-pananahana no antony lehibe iray satria tsy mamaritra ny “ara-nofo” ny Lalànan'ny Fampitoviana Hirika ary nilaza ny tribonaly fa tsy afaka mandray ny voasoratra hoe ho an'ireo lehilahy pelaka. Nolavina ny raharaha noho izany ary voatery nandoa ny vola ny lany ara-pitsarana ho an'ny (mpiaro ny) voampanga i Maharaj.
Nanjary teboka nifantohan'ny adihevitra tao amin'ny media sosialy ny fironana ara-pananahan'i Maharaj. Araka ny filazan'i Leela Ramdeen, izay anisan'ny tao amin'ny fitsarana nanombana ny raharaha, tsy tafiditra ao anatin'ny Lalànan'ny Fampitoviana Hirika ny fanorisorenana ara-nofo, na koa ny fironana ara-nofo.
Nanantitrantitra i Ramdeen fa tsy ampy ny volavolan-dalàna momba ny fanorisorenana ara-nofo, natolotr'i Jennifer Baptiste-Primus, minisitry ny asa sy ny fampivoarana ny orinasa madinika tao amin'ny parlemanta tamin'ny marsa 2019, ary nilaza fa ilaina ny lalàna mba hanomezana fahefana ny politikam-panaovan-dalàna.
Voaresaka matetika tato anatin'ny taona vitsivitsy ny lohahevitra momba ny fanorisorenana ara-nofo any amin'ny toeram-piasana, izay antsoin'i Gabrielle Hosein, avy ao amin'ny Ivom-pampianarana momba ny lahy sy ny vavy sy ny fampandrosoana ao amin'ny Oniversiten'i Antilles hoe “ny toetra hetero(sexuel), fehezin-dray, anjakazakan'ny lahy ao amin'ny fanjakana Karaiba”.
Na dia manana politikam-pirenena momba ny fanorisorenana ara-nofo any amin'ny toeram-piasana aza i Trinite sy Tobago, izay miresaka ny fifandirana ara-barotra taloha mamaritra ny fanorisorenana ara-nofo, [ho] tsy misy lalàna mafy kokoa, ary tahaka izany koa ny politika mahomby momba ny fanorisorenana ara-nofo ao anatiny sy ivelan'ny tontolon'ny toeram-piasana. Na izany aza, tsy lalàna ny politikam-panaovan-dalàna – izay midika fa tsy misy fenitra sy taridalana izany.
Raha ny marina, dia Belize, Barbades sy Jamaika (efa nohavaozina ankehitriny).no hany zaratany Karaiba manana lalàna momba ny fanorisorenana ara-nofo.
Rehefa nampidirina ny volavolan-dalàna vaovao momba ny fanorisorenana ara-nofo tao amin'ny parlemanta Trinité sy Tobago tamin'ny fiandohan'ity taona ity, naneho ny heviny ny fikambanan'ireo vehivavy mpiantsoroka (cadres) eto Trinite sy Tobago (AFETT):
Nandrisika ny AFETT fa ny politika volavolan-dàlana dia tokony hanome fiarovana tanteraka, sy “lalamben'ny fanasaziana ho an'ny olona manao fiampangana lainga sy ho an'ireo olona mampiasa ny politika amin'ny fomba ratsy:”
Tsy misy ny tokom-pizarana momba ny fanorisorenana ara-nofo eny amin'ny toeram-piasana ny Lalànan'ny Fampitoviana Hirika. Ny andininy faha-11 amin'ny lalàna dia mamaritra ny “fanavakavahana amin'ny asa” mifototra indrindra amin'ny ara-nofo. Na izany aza, tsy hita ilay teny hoe “fanorisorenana ara-nofo”. Midika koa izany fa tsy ao anatin'ny fahefan'ny Equal Opportunity Commission (EOC na Vaomieran'ny Fampitoviana Hirika), sampan'ny governemanta misahana ny fanavakavahana eny amin'ny toeram-piasana ny raharaha tahaka izany
Tamin'ny raharahan'olona ambony vao haingana mahakasika ny filohan'ny Angostura Holdings Limited, Rolph Balgobin, niato ny fahafahany mihazona ny andraikiny rehefa niampanga azy tamin'ny fanorisorenan ara-nofo ny vehivavy mpiasa iray. Afaka tamin'ny fiampangana izy avy eo, ary nanambara ny fanadihadiana tao amin'ny orinasa fa nifanandrify tamin'ny famotorana tsi-fetezana ara-bola tao amin'ilay orinasa nataon'ilay vehivavy ny filazan'ity vehivavy niampanga azy ity. Voaroaka avy eo ity vehivavy mpiantsoroka izay niampanga azy ity .